NubisCoin စျေး - အွန်လိုင်း NUBIS ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို NubisCoin (NUBIS)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ NubisCoin (NUBIS) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ NubisCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ NubisCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
NubisCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
NubisCoinNUBIS သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0873NubisCoinNUBIS သို့ ယူရိုEUR€0.0739NubisCoinNUBIS သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0668NubisCoinNUBIS သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0795NubisCoinNUBIS သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.778NubisCoinNUBIS သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.551NubisCoinNUBIS သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.93NubisCoinNUBIS သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.325NubisCoinNUBIS သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.116NubisCoinNUBIS သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.122NubisCoinNUBIS သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.94NubisCoinNUBIS သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.676NubisCoinNUBIS သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.468NubisCoinNUBIS သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹6.53NubisCoinNUBIS သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.14.73NubisCoinNUBIS သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.12NubisCoinNUBIS သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.133NubisCoinNUBIS သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿2.71NubisCoinNUBIS သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.606NubisCoinNUBIS သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥9.32NubisCoinNUBIS သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩103.4NubisCoinNUBIS သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦33.81NubisCoinNUBIS သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽6.39NubisCoinNUBIS သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴2.4
NubisCoinNUBIS သို့ BitcoinBTC0.000008 NubisCoinNUBIS သို့ EthereumETH0.000227 NubisCoinNUBIS သို့ LitecoinLTC0.0016 NubisCoinNUBIS သို့ DigitalCashDASH0.000962 NubisCoinNUBIS သို့ MoneroXMR0.00098 NubisCoinNUBIS သို့ NxtNXT6.81 NubisCoinNUBIS သို့ Ethereum ClassicETC0.0129 NubisCoinNUBIS သို့ DogecoinDOGE25.18 NubisCoinNUBIS သို့ ZCashZEC0.00106 NubisCoinNUBIS သို့ BitsharesBTS2.69 NubisCoinNUBIS သို့ DigiByteDGB2.79 NubisCoinNUBIS သို့ RippleXRP0.31 NubisCoinNUBIS သို့ BitcoinDarkBTCD0.00301 NubisCoinNUBIS သို့ PeerCoinPPC0.29 NubisCoinNUBIS သို့ CraigsCoinCRAIG39.77 NubisCoinNUBIS သို့ BitstakeXBS3.72 NubisCoinNUBIS သို့ PayCoinXPY1.52 NubisCoinNUBIS သို့ ProsperCoinPRC10.95 NubisCoinNUBIS သို့ YbCoinYBC0.00005 NubisCoinNUBIS သို့ DarkKushDANK28.01 NubisCoinNUBIS သို့ GiveCoinGIVE189.03 NubisCoinNUBIS သို့ KoboCoinKOBO19.88 NubisCoinNUBIS သို့ DarkTokenDT0.0804 NubisCoinNUBIS သို့ CETUS CoinCETI252.07